मिसौरी WIC | JPMA, Inc.
हामी तपाईं र तपाईंको परिवारलाई मिसौरी डब्ल्यूआईसी कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौं। कृपया हामीलाई कल गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग डायल गरेर केहि प्रश्नहरू छन् भने: 573-751-6204 वा (टोल-फ्री) 800-392-8209। तपाइँ मिसौरी डब्ल्यूआईसी यहाँ ईमेल गर्न सक्नुहुनेछ - [ईमेल सुरक्षित].
तपाइँको WIC खाद्य पदार्थहरूको लागि किनमेल गर्ने तरिका नयाँ मिसौरी eWIC कार्डको साथ सजिलो हुन गइरहेको छ! तपाइँको कार्ड कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे थप जान्नको लागि यी भिडियोहरू हेर्नुहोस्।
A: होईन, यो कुनै उल्ल is्घन होईन यदि तपाईं कम खरीद गर्ने छनौट गर्नुहुन्छ वा WIC खाद्य पदार्थहरू तपाईंलाई सिफारिस गर्नुभएको हो।
A: केहि विकल्पहरूको लागि केही खाद्य पदार्थहरूको लागि अनुमति दिइन्छ। तपाईको WIC स्थानीय एजेन्सीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् तपाईका विकल्पहरू छलफल गर्नका लागि र तपाइँको खाना बेनिफिटहरू परिवर्तन गर्न। स्टोरमा कुनै प्रतिस्थापन गर्न सकिदैन।
A: WIC खाद्य पदार्थ केवल व्यक्तिको लागि हो जसको नाम जाँचमा छ। यदि तपाईंको घरमा WIC चेक प्राप्त गर्नेहरूले केहि निश्चित WIC- उपलब्ध भोजन खाँदैनन्, या त स्टोरमा नपाउँनुहोस् वा स्थानीय एजेन्सी स्टाफलाई तपाईंको चेकबाट हटाउन अनुरोध गर्नुहोस्।
A: तपाईंको WIC स्थानीय एजेंसीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईं एक न्यूट्रिशनिस्टसँग भेट्नुहुनेछ र तपाईंलाई उपलब्ध विकल्पहरूको बारेमा छलफल गर्नुहुनेछ।
WIC कार्यालय खोज्नुहोस्
"खोज्नुहोस्"मिसौरी WIC अधिकृत फुटकर बिक्री”चिन्ह।
तपाईंको WIC स्थानीय एजेन्सीबाट प्रदान गरिएको किनमेल सूची समीक्षा गर्नुहोस् वा स्टोरलाई तपाईंको लाभ ब्यालेन्सको प्रिन्टआउटको लागि सोध्नुहोस्।
शपिंग सूचीले eWIC कार्डमा उपलब्ध सबै घरेलु खानाका लाभहरू पहिचान गर्दछ।
* तपाईंको eWIC कार्ड सात ()) अवैध पिन प्रयास पछि लक हुनेछ। तपाईंको WIC स्थानीय एजेन्सी भ्रमण गर्नुहोस् तपाईंको कार्ड अनलक गर्न।
जब WIC लेनदेन पूरा हुन्छ, तपाईंलाई तपाईंको कार्ड हटाउन प्रेरित गरिन्छ र एक टोन वा बिप आवाज हुनेछ।
अनुमति - यो आईटमलाई मिसौरी WIC को लागी अनुमति छ! एउटा कुरा जान्नको लागि तपाईले कुनै वस्तुलाई अनुमति दिईएको हुनसक्दछ, तर यो तपाईंको WIC फूड बेनिफिटको अंश होइन, त्यसैले तपाईं यसलाई WIC सँग खरीद गर्न सक्नुहुन्न। उदाहरणको लागि, एक बर्षको बच्चा पूरै दुध पाउँछ। यदि तपाईंसँग तपाईंको परिवारमा एक बर्षेको बच्चा छैन भने, सम्पूर्ण दूध तपाईंको WIC फूड बेनिफिटहरूको अंश हुनेछैन, र तपाईं रजिस्टरमा सम्पूर्ण दूध किन्न सक्षम हुनुहुने छैन। WIC लाभहरू WICShopper अनुप्रयोगमा लिंक नभएसम्म, यो "अनुमति दिईएको" सन्देश तपाइँको परिवारका लाभहरूमा लागू हुन सक्दैन।
WIC वस्तु होइन - यसको मतलब मिसौरी WIC ले यस वस्तुलाई अनुमोदन गरेको छैन। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ WIC खाद्य सुविधाहरूसँग यो खाना किन्न सक्षम हुनुपर्दछ, हामीलाई "मैले यो खरीद गर्न सकेन!"यो अनुप्रयोगमा बटन।
पहिचान गर्न असमर्थ - यसको मतलब अनुप्रयोगले निर्धारण गर्न सक्दैन यदि आईटम WIC- योग्य छ। यो पसलमा कनेक्टिविटी नभएको कारण हुन सक्छ। वाइफाइमा जडान गर्न वा स्टोरमा स्पट खोज्ने प्रयास गर्नुहोस् जहाँ तपाईं राम्रो सेवा पाउनुहुन्छ।
अंग्रेजी मिसौरी डब्ल्यूआईसी खाद्य सूची
स्वास्थ्य विभाग र वरिष्ठ सेवा वेबसाइट भित्र निहित सबै जानकारीहरू शैक्षिक उद्देश्यको लागि मात्र हो र निदान वा उपचारको लागि प्रयोग गरिनु हुँदैन। जानकारी डब्ल्यूआईसी पोषण र सम्बन्धित मामिलाहरु को समझ को लागी प्रदान गरीन्छ। उपभोक्ताहरूले मेडिकल सल्लाहलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन वा खोज्नमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन किनभने तिनीहरूले यो साइटमा देखेका हुन सक्छन्। पोषण विशेषज्ञ, चिकित्सक, र अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरू अन्य स्रोतहरू परामर्श र यस साइटमा निहित जानकारी पुष्टि गर्न प्रोत्साहित छन्। कुनै पनि गैर-सरकारी इकाई, उत्पादन, सेवा, वा जानकारीको स्रोत जुन यस साइटमा समावेश हुन सक्छ वा यसलाई प्रत्यक्ष वा निहित, मिसौरी स्वास्थ्य विभाग र वरिष्ठ सेवाहरू द्वारा अनुमोदन मानिनु हुँदैन। थप रूपमा, विभागलाई अन्य साइटहरूमा समावेश गरिएको जानकारीको लागि जिम्मेवार मान्न सकिदैन जससँग यसको वेबसाइट लि linked्क हुन सक्छ। यदि कुनै आपत्तिजनक जानकारी यी साइटहरूमा फेला पर्दछ भने, हामी द्वारा तुरून्त सूचनाको प्रशंसा गर्नेछौं ईमेल.
मिसौरी स्वास्थ्य विभाग र वरिष्ठ सेवाहरू (MDHSS) भेदभाव फारम को गुनासो